नैतिकताका आधारका अध्यक्षबाटै राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्र अब के गर्छन् ? बाहिरियो उनको भित्री तयारी ! | Prahar News
काठमाडौं । पार्टीले देशभर नराम्रोसँग स्थानिय चुनाव हारेपछि विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्रले अब के गर्लान् भन्ने धेरैलाई चासो छ । यही चासोका बीच मिश्र के गर्दैछन् ? भन्ने कुरा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । मिश्रले पार्टीका नेता र सदस्यहरूलाई राजीनामा नदिन सुझाएका छन्। स्थानीय चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारहरूको अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएपछि मिश्रले बुधबार पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
‘पार्टीका कतिपय नेता तथा सदस्यहरूले राजीनामा दिन थाल्नुभएको या राजीनामा दिने तयारी गरेको देखियो। कृपया त्यसो नगरिदिनु होला,’ उनले आज ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘कुनै पनि पार्टीको नेताले नाजुक चुनावी परिणाम आएपछि जे गर्नु पर्ने हो, मैले त्यही नै गरेको हुँ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न दिनुहोस् र त्यसले नै पार्टीको भावी प्रारम्भिक बाटो तय गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’आफूले राजीनामा दिएपछि धेरै फोन आइरहेको पनि उनले बताएका छन्। कतिपयले आफूलाई अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेकोसमेत मिश्र बताउँछन्।
उनले कविता लेख्नेदेखि सिनेमामा अभिनय गर्न सक्नेसमेत बताएका छन्। ‘कविता लेखुँला, किताब लेखुँला, परोपकारी काम गरूँला र मन लाग्यो भने सिनेमामा अभिनय पनि गरूँला! फेरि एक पटक तपाईंहरूको स्नेह र सद्भावप्रति नतमस्तक छु।’ उनले प्रतिकूलताहरूबाट गुज्रिँदा पनि आफूलाई स्नेह र सद्भाव देखाएर सन्देश पठाउनेप्रति आभारी भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘तपाईंहरूको मायाले त विविध प्रतिकूलताबीच आजसम्म मलाई अघि बढ्ने सम्पूर्ण शक्ति प्रदान गरेको छ। नत्र कहाँ सकिन्छ र! ममा कमजोरी छन्, हाम्रा विचार नमिल्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यतिचाहिँ वाचा गर्छुः मबाट बेइमानी हुँदैन। यो समाज र देशलाई ठग्ने काम हुँदैन। “बरू नष्ट हुँला, भ्रष्ट हुन्न” भनेर मैले भन्ने गरेकै छु,’ उनले भनेका छन्।